( ကောင်းကင်ပြာကို တမ်းတသူ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ကောင်းကင်ပြာကို တမ်းတသူ )	11
( ကောင်းကင်ပြာကို တမ်းတသူ )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Aug 22, 2015 in Creative Writing, Poetry | 11 comments
ဆောင်းအဝင်မှာဖြင့် ဆုံစို့ကွာ ။
kai says: ကောင်းကင်ညို.. ပြိုတော့.. မိုးပေါ့…
ကောင်းကင်ပြာ… လာရင်.. နေသာတယ်နော..
အပူဒဏ်တွေခံနိုင်ဖို့.. ခေါင်မိုးလေး… ပြင်..။ ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖုန်းဆက်လိုက်လေ
Alinsett @ Maung Thura says: .ကောင်းကင်ပြာကို တမ်းတနေတဲ့အထဲမှာ… အိုးမြူးအပြင်…နောက်တစ်ယောက် ရှိသေးတယ်..
အဲဒါကတော့…. အောင်ကြူးပဲ..ဖြစ်ပါတယ်..ခင်ညား…….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
aye.kk says: သည်စိတ်ကလေးကိုဖြင့်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူလာလေမလား
တောင်ပေါ်သား says: သဂျီးရေ
အပေါ်မှာ တစ်ထပ်ရရှိသေးလို့ ခေါင်ပူမှာ မကြောက်ရ ဇီဇီရေ
ဧရိယာပြင်ပ တဲ့ ကြောင်လောက်က အေးဆေးပါ အလက်ဆင်းရယ် :P
လာသင့်ချိန်တန်ပါပြီလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
Mike says: .အချိန်တန်တော့လည်းကောင်းကင်ကြီးကပြာလာအုံးမှာပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ..ကြောင်က္ခထီးကောင်းကင် မောင်ကြီးစောင်းတင် ဗြောင်ဂျီးချောင်းရွှင် လောင်မီးဖောင်းကင်
may july says: ပြာလဲ့လဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ
စိမ်း စို နေတဲ့ သစ်တော တွေ မရှိတော့
မြေသားအတိ လွင်ပြင်ကြီး ပေါ် မှာ
ရေဖွေးဖွေးတွေ လွှမ်းခြုံ လိုက်ပြီပေါ့ ….
may july says: မြေသားအတိ လွင်ပြင်ကြီးပေါ်မှာ
ရေဖွေးဖွေးတွေ လွှမ်းခြုံ လိုက်ပြီပေါ့ ..
အောင် မိုးသူ says: ကောင်းကင်ပြာ တို့ရဲ့ကောင်းကင်ပြာ